Badhasaabka Saaxil Oo Ka Hadlay Qoxoonti Ka Soo Cararay Colaadda Yemen Oo Berbera Ka Soo Degay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Badhasaabka Saaxil Oo Ka Hadlay Qoxoonti Ka Soo Cararay Colaadda Yemen Oo Berbera Ka Soo Degay
Berbera (SDWO): Warbixin ay soo saareen hay’adaha UNHCR iyo IOM ayay ku sheegeen in todobaadkan ay ka caawiyeen sidii ay dalkooda ugu laaban lahaayeen qoxoonti Soomaali ah oo muddo qoxoontinimo ku joogay dalka Yemen.
Qoxoontigaas oo ay tiradoodu ahayd 116 qof ayaa doonta siday oo ka soo baxday dekadda magaaladda Cadan ee dalka Yemen waxay Isniintii todobaadkan ka soo dejisay dekadda Berbera ee gobolka Saaxil.
Badhasaabka gobolka Saaxil Saaxil Axmed Cismaan Xasan (Timo-cade), oo khadka telefoonka ugu waramay Dawan galabta isagoo joogay Berbera, ayaa sheegay in qoxoontigaas oo badankoodu dhalasho ahaan ka soo jeedeen Koonfurta Soomaaliya ay u gudbeen meelihii ay u socdeen.
“Qoxoontigaasi waxay Berbera yimaadeen Isniintii todobaadkan, kuwaasoo tiradoodu ahayd 116. Waanay ka soo degaan Berbera inta badan qoxoontiyadu. Dadkaasi waxay u badnaayeen kuwo dhalasho ahaan ka soo jeedda Koonfurta Soomaaliya. Iyadoo ay ku jireen kuwo Somaliland u dhashay.
Dumar, caruur iyo waayeel-ba way lahaayeen. Kuwii Koonfurta Soomaliy u dhashay way dhaafeen Berbera oo waxay u gudbeen xagga Soomaaliya oo ay u socdeen”ayuu yidhi badhasaabka Saaxil.
Badhasaabka ayaa intaas ku daray in marka dadka qoxoontiga ah ay dekadda Berbera ka soo degaan in la dejiyo xarun lagu nasiyo, isla markaana lagu baadho caafimaadkoodda iyadoo markaa kadibna loo gudbiyo meesha ay u socdaan.
Isagoo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Qoxoontigu markay Berbera ka soo degaan waa la qaabilaa, oo waxaa qaabisha inta badan hay’adda Somaliland u qaabilsan qoxoontiga iyo barakaceyaasha, xarun ayaana ku taalla Berbera dadka qoxoontiga ah ee soconayaa marka dekadda laga soo qaado ay ku nastaan.
Dhinaca kale Axmed Cismaan Timo-cade, waxa aanu wax ka waydiinay dhaq-dhaqaaqa dhoofka xoolaha ee dekadda Berbera, maadaama oo ay foodda inagu soo hayso ciida Carafo oo ah xiliga xoolaha ugu badan loo dhoofiyo moosinka Xajka.
Waxaanu yidhi “Dhaq-dhaqaaqa dekadu aad ayuu u sareeyaa xiligan, oo inta badan waa mashquul, xoolaha xajkuna xoog ayay u socdaan. Kuwo Cumaan tegaya, kuwo Yemen tegaya, kuwo Sucuudiga loo waddo iyo meello kale-ba, xooluhu aad ayay u badan yihiin, shaqaduna aad ayay u fiican tahay oo meel sare ayay maraysaa maalmahan”.
Dhawrkii sanadood u danbeeyay waxaa dekadda Berbera ka soo degay doonyo siday kumanaan qoxoonti ah oo ka soo cararay colaadaha ka jir dalka Yemen, iyadoo kuwana ay noqonayaan kuwii ugu danbeeyay ee soo gaadha Berbera.
Xigasho: Wrgeyska DAWAN